Muraayadaha muraayadaha qoraxda iyo Koofiyadaha. Cayaaraha indhaha iyo moodada magaalada | The Indian Face
Ururinta muraayadaha indhaha ee ragga iyo dumarka waxay ka kooban yihiin noocyo iyo midabbo kaladuwan oo kaladuwan. Muraayadaha indhaha polarxardhay nooc kasta oo shuruudo ah iyo xarkaha iftiinka badan dareen fiican.
Soo ogow aruurinta koofiyadeena oo ay abuurtay iyo kuwa jecelba ciyaaraha isboorti ee bannaanka iyo xiisaha leh. Ku dhiirigelisay isboortiga inta badan na aqoonsan. Qaabka Trucker inuu kuu raaco meel kasta oo aad tagtid. Maxaad isku aqoonsataa?
Xaraashka barafka iyo barafka barafka waxaa loo sameeyay oo loogu talagalay freeriders. Waxqabadka farsamada sare si loo damaanad qaado waxqabadka ugu fiican iyo kalsoonida ugu badan ee xaaladaha ugu daran inta lagu jiro tababarka Freeride.
Saacadaha quartz ee Japan oo uu naqshadeeyay sayidkeenna sameeyaha. Noocyo kala duwan iyo midabbo dhammaan dhadhanka. Waxay ku habboon yihiin ragga iyo dumarka waxayna bixiyaan qaab aan caadi aheyn oo taxaddar la'aan ah.
Ku soo booqo qaybteena dalabyo flash ah. Alaabada la xushay oo leh qiimo dhimis dhan 60% 24 saacadood. Ha u ogolaan inay baxsadaan !!
Waxaan nahay ruux xor ah taasina waa tayada ugu muhiimsan. Waxaan ku jecel nahay nolosha waxaanan dooneynaa inaan ka faa'iideysano ilbiriqsi kasta, sida haddii ay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay. Waxaan ka carareynaa xeerarkii la aasaasay, ma qabsanayno waxaanuna madaxa ugu boodaynaa khibrado cusub.
The Indian Face® waa astaan ​​ah saacado iyo muraayadaha indhaha oo bilaash ah iyo adrenaline-power spirit. Dhar iyo qalab loogu talagalay ragga, haweenka iyo carruurta. Waxaa la sameeyay 2007-dii waxaana hada lagu iibiyaa in ka badan 30 wadan oo ku kala yaala Yurub, America, Asia iyo Oceania. No rules, no limits, just HIGH ADRENALINE!.
DUGSIGA AN INDIAN